Gaadiid u gaara Dadka Da’da ah iyo Dadka Baahida Gaarka ah Qaba
Webseydka FindARide.org wuxuu ku xiraa dadka waaweyn iyo dadka naafada ah gaadiidka ay doonayaan ee aaggaaga. Baska lagu magacaabo West Seattle Hyde Shuttle ay leedahay Sound Generations wuxuu bixiyaa adeeg albaabka kugu imanaya oo lacag la’aan ah oo la siiyo dadka ka weyn 55 jir iyo dadka naafada ah.
Ka dooro aaggaaga iyo baahida socodka aad qabto webseydkaan oo ku siinaya talooyin gaadiidka ka jira aaggaaga.
Gaadiidka baska ee dadka waaweyn iyo dadka naafada ah ee ku nool aagga Southwest Seattle. Halkan riix si aad u dablbato ama wac (206) 727-6262. Adeeg tarjubaano ah waa diyaar marka la soo dalbado.
65 jir iyo kaweyn ama qof naafo ah? Hel gaadiid oo la heli karo, oo la awoodi karo marka aad rabto.